Vertical mutakurwi kuyerera
Chinjikira mutakurwi kuyerera
Xizi erevheta anopenya Turkey Eurasian erevheta kuratidza
March 23, 2017 - 26, rechi15 Turkish Eurasian erevheta inoratidzirwa yakaitwa Istanbul, Turkey, kuti exhibiti ...
March 23, 2017 - 26, rechi15 Turkish Eurasian erevheta inoratidzirwa yakaitwa Istanbul, Turkey, ari kuratidza inobatanidza yose erevheta indasitiri ngetani zvose vanozivikanwa Enterprises. Sezvo epamba erevheta indasitiri kuti kutungamirira escalator chigadzirwa vagadziri, bhizimisi uye basa rubatsiro, Xizi erevheta akakokwa exhibitors.
The pashoo, kuWest erevheta kune wakapamhama rakazaruka dumba kumativi ose kuratidza zvizere kuWest erevheta mabhizimisi zvazvakanakira, zvekushandisa simba uye yokutengesa pamwero, pamwe akatevedzana zvakangwara zvigadzirwa zvitsva kukwezva nyika itsva kubva pasi pose kuti vauye itsva uye vakwegura vatengi kubvunza Kukurukurirana, ivo vakaratidza tariro kuti pamwe West elevators zvakadzama pamwe uye zvakafanana kukura. The pashoo, kuWest erevheta mberi kunyika erevheta indasitiri kuratidza simba muchiso simba uye kwazvo michina simba. Yemberi, West vachaedza kuongorora erevheta, uye kushingaira kudzidzira "kubuda" inokosha kuronga, unoratidza nyika muchiso nepurani.
Sezvo Turkish hurumende yakasarudzwa erevheta basa, kumavirira erevheta munyika ino asi vakasiya anoshamisa mazhinji, mumwe chaiwo Alacity chirongwa, zvinokosha guta Alasehir muTurkey, pedyo lzmir, iri Uriri mashanu zvitoro uye 22 pedzimba imba ari Alasehir ano akangwara varipo. Xizi akapa mufambi rinobvumidza, moto anosimudza, escalators uye walkways kuti asangane ichangobva EN81 mureza uye CE advertising. Nokuti xizi, ichi hachisi chete kudikanwa kukura, asi basa kukurudzira "vakaitwa China" kunyika.
Win mu co-kusika - 2017 xizi erevheta yokutengesa kugoverana bato
On February 24, nokumavirira erevheta "kuumba pfungwa. Win pa 2017 kumavirazuva erevheta yokutengesa mugove bato "panguva W ...
On February 24, nokumavirira erevheta "kuumba pfungwa. Win pa 2017 kumavirazuva erevheta yokutengesa mugove bato "panguva kumadokero hotera yapera, Mr West mubatanidzwa President Chen Xiaxin, MS zvipo itsva Theo President, Mr West erevheta President wen-Chao Liu, nokumavirira erevheta Marketing Executive MS rehapa the tse pamwe utariri kambani uye kugonesesa kubva zvose pamusoro nyika navatengesi rokutengesa vepamusoro vakaungana, akapupurira chiitiko ichi pamwe chete.
Party mu "Hangzhou kugamuchira iwe" rwiyo ndokupfura kure, ipapo akapinda kiyi kubatana mubato - West erevheta kunzi mhemberero. The bato waikudzwa kushanyira Lin'an Municipal Committee Standing Committee, Ms. Shen Hui uye West Lift vadyidzani yokupupurira ichi nhoroondo nguva, nemvura kubva kumakona ose apasi ichidiridza "West" ichi anotakura mweya Chinese National mukugadzira indasitiri mhizha muchiso. West erevheta makumi matatu kukura, kuwanda, akaita sedonhwe amabwe dzokupfeka, nzizi uye rinosakara mugungwa, ndiyo zvishoma kuwanda vakakanda kwakajeka nhasi. Ano Xizi vachasimudza, kuputswa nhumbana kunze, hunoshamisa maruva, achava kubwinya akatanga rwendo itsva!
Achiteverwa President Liu Wenchao uye Marketing Executive Director Xie Liping dzinokwana detembo - "vanopedza West": maruva kuMadokero, unomutsa makumi matanhatu, taifamba pamwe chete isati, nguva dzose Ndinogara nyora pasi nhetembo, saka kuti mhepo kuimba asingatsananguriki pfungwa ... ... kurira nhetembo kungodzokorora uye nhoroondo rakaoma basa chekambani ziya vatana photos ndangariro wose shure kusvika kare. The The The The The
Liu uye Xie nhamba nhetembo kungodzokorora uyewo kurega co-purezidhendi West, Va Chen Xiaoxin anzwe, akati kuti West nhasi, kuti nebudiriro erevheta hakusi netsaona, asi kubva kumakona ose apasi ose kunoshamisa mudiwa uye West elevators kushanda pamwe chete, parutivi Tichiedza kuuya. Tine tositi, uye dai kuWest erevheta Mukuru kuratidzwa, achivimbisa! Manheru rose ikazadzwa mellow waini, mumwe nomumwe zvaidururwa mafaro.
Chimiro webato mupfumi uye zvinonakidza, chirongwa chinoshamisa zvisingaperi. The pati zvakare akagadzirira kushamisika rekuberekwa nokuda rokuberekwa nevadiwa nomwe, Va Liu Wenchao, President uye Ms. Xie Liping, President wenyika Marketing, pachake akatuma dzakanakisisa zvido kupedza kudanana nguva pamwe hurefu.
The anoshamisa usiku muna zvinofamba uye mufaro yakaguma, West erevheta ane kuona mutambo akazarura mavambo kudzoka Kudyidzana. Kana pasina dzinogarisana, apo vari kungodzungaira - dzinodiwa vadiwa, kugamuchira kuenda kumusha!
In pakusikwa West Sub-erevheta yokutengesa mugove zvichatevera anoshamisa, saka rambai zvirire!
Copyright © 2017 XIZI erevheta